Iindaba-Kwi-2020, ilizwe lingene kwidabi eliphambili lokulwa ne-COVID-19
Kwi-2020, ilizwe lingene kwidabi eliphambili lokulwa ne-COVID-19. Eli dabi lide kunokuba bekulindelwe. Ngo-Okthobha, NGCONO wasungula isibulala-magciwane esitsha kunye nokusula kwe-antibacterial.
Le F&U isula intsholongwane xa isula iqulethe ikhonkco eline-quaternary ammonium yetyuwa yokubulala iintsholongwane. Olu hlobo lwesibulala-ntsholongwane lusebenza ngendlela yokubulala iintsholongwane. Phakathi kwazo kukho i-quaternary ammonium yetyuwa ye-0.18-0.22.
Kutheni le nto umxholo we-quaternary yetyuwa ye-ammonium eyi-0.18% -0.22%?
Lo mxholo wetyuwa ye-ammonium ye-quaternary awunakubulala kuphela iintsholongwane kwaye ungabulali iintsholongwane, kodwa awunachuku. Xa uxinzelelo luphakathi kwe-0.18% kunye ne-0.22%, inokuvelisa isithintelo se-ventricular barrier, esibangela ukukhula kweebhaktiriya kunye neentsholongwane ukuba zithintelwe kwaye zife.
Ngokukodwa kuninzi lweebhaktheriya ezinje ngeStaphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, njl., Ukusebenzisa "iphepha" lesundu kunokukhawuleza kungasebenzi iintsholongwane kunye neentsholongwane.
Ngokokuvavanywa yimibutho egunyazisiweyo, inqanaba lokucoca inzalo lifikelele kuma-99.9%.
Nangona iingcali zithi ukuhlamba izandla rhoqo, kunyanzelekile ukuba wenze umsebenzi olungileyo wokubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane kwezandla. Ewe, ukucoca ngamanzi ompompo akuyi kuhlamba iibhaktiriya ezandleni.
Nangona utywala bunefuthe lokubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane, ukusebenza gwenxa kunokubamba umlilo. Kwaye utywala abunabuhlobo kulusu lwethu.
Ngala mayeza anokulahlwa zintsholongwane, ungayisebenzisa ukosula izandla zakho nangaliphi na ixesha, ukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane, kunye nokwala usulelo lwebacteria.
Kukwakho nabantwana abaziphethe kakubi abadla ngokungcolisa izandla zabo. Kwaye uyisebenzise ukosula inzalo kunye nokubulala iintsholongwane akunakuba ngcono, kugxilwe kuthambile kakhulu kwaye kunobuhlobo kulusu.
Ezi zisuli ze-FU zokubulala iintsholongwane zenziwe ngelaphu elikumgangatho ophezulu elingalukwanga, elithintela ulusu ngaphandle kokucaphuka okanye ukungaphatheki kakuhle.
Izinto eziqulathwe kule fomyula zithobela ngokupheleleyo imigangatho yokusetyenziswa kweManyano yaseYurophu, kwaye imiba yezokhuseleko neyempilo ziyaqinisekiswa.
Oku kusula kumanzi kuneentlobo ngeentlobo zeziqholo ezinjengelemoni, iidiliya, ikhala, i-lavender njalo njalo. Sikwabonelela ngeenkonzo ezintsha ezenzelwe wena. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngentsebenziswano.